Primera Mhepo zviratidzo zveAirbus FHS-TSP inofambiswa neSkywise
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Primera Mhepo zviratidzo zveAirbus FHS-TSP inofambiswa neSkywise
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • Latvia Breaking Nhau • nhau • Technology • ushanyi • kutakura
Primera Air, iyo Riga-yakavakirwa nendege, yasarudza Airbus Flight Hour Services - Yakagadziriswa Support Package (FHS-TSP) yezvikwata zvayo zvakakwana zveA321neo ndege (kusanganisira A321LR). Pasi pechibvumirano, Airbus ichabata mabasa epamhepo (dziva, panzvimbo-saiti mumatura makuru uye nzvimbo dzekuchengetera, kugadzirisa), zvigadzirwa, kugadziridza, kutakura, manejimendi manejimendi manejimendi uye mabasa ekuchengetedza mitsara yePrimera Air. Izvi zvichatsigirwa nemadziva achangobva kuvhurwa eAirbus FHS muLondon Heathrow neMiami uye anotungamirwa neboka rakazvipira reAirbus Fleet technical Management (FTM) timu iri muStansted, ichipindirana nezvikwata zveAirbus pasirese.
Airbus FHS ichasimbiswa neAirbus 'data chikuva Skywise, kutora mukana weazvino-we-iyo-data dhizaini uye analytics yekumisikidza Primera Air's A321neo fleet kushandiswa. Iri sevhisi nyowani rinobatanidza 'hombe dhata' kusimudzira zvakanyanya mazinga ekushanda mashandiro, zvichienzaniswa neazvino maindasitiri matekinoroji. Nekuda kweSkywise, Airbus FHS-TSP ichaendesa zvine mutsindo zvikamu uye fungidziro yekuverenga, simba uye rakapetwa rekutsvagisa keteni optimization, ichisimudzira mashandiro uye manejimendi kugona.
Hrafn Thorgeirsson, CEO wePrimera Air akati: "Yedu itsva Airbus A321neo yave pedyo nekona. Rimwe rematambudziko makuru pakuunza mhando nyowani yendege mune chero ndege ndeyokugadzira kubva pakatangira nharaunda yakakodzera kwavari maererano nezvese zviri zviviri kubhururuka uye kwehunyanzvi mashandiro. Ichi ndicho chikonzero takasarudza kubvumirana neAirbus kune yayo yepamusoro Flight Hour Services uye Yakagadzirirwa Rutsigiro Package inofambiswa neSkywise - iyo ichave nechokwadi chekuti Primera ichave neanogona kwazvo pfungwa nemaoko kubva kuAirbus achishanda pamwe neveTechnical Teams kuno kuRiga neCopenhagen kuchengeta ndege dzedu dzinobhururuka nenguva. ”
Laurent Martinez, Head of Services nebazi reAirbus akati: "Tinodada nekugamuchira Primera Air seyedu yekutanga yeFHS Inotungamirwa nemutengi weSkywise muEurope. Tine yakanakisa track-rekodhi yekutyaira akakwirira mashandisirwo ezuva nezuva mashandisirwo uye mashandiro ekuita nevatengi vedu veFHS-TSP uye tinofara kupiwa imwe ndege. "Tiri kufara kutanga nguva nyowani yeFHS Inofambiswa neSkywise takabatana naPrimera, uye kuve mubatanidzwa wakazara murwendo rwavo rwekuvandudza."
Iyi FHS-TSP ichatsigira kuvhurwa muna Chivabvu kwePrimera nzira nyowani dzekuyambuka kuenda kuUS neCanada (kusanganisira Newark, Boston neToronto) kubva kumatatu makuru eEuropean (London Stansted, Birmingham neParis CDG).
Airbus FHS inokomberedza portfolio ye yakazara yakanyatsobatanidzwa yezvinhu masevhisi, einjiniya nendege manejimendi manejimendi, kugonesa iwo akanyanya mwero ekuwanikwa kwendege nekutumira mashandiro. Kuburikidza neFHS, nendege uye vanoshanda vanogona kukwidziridza Airbus 'yakafara uye inoshanduka portfolio yezvigadzirwa nemasevhisi, inotsigirwa neboka rayo repasirese revashandi veaerospace.